Nhau - Mamwe matipi ekusarudza iyo S-CONNING yakatenderera bhodhoro rekunyora muchina
Chekutanga pane zvese, kumhanya kwemuchina wekunyora kunofanirwa kutariswa: S-CONNING inofanirwa kusarudza muchina wekunyora zvinoenderana nezvinodiwa nemutengi uye mutsara wekugadzira wapfuura.
Chete mushure mekufungisisa kwakadzama kunogona kuenzaniswa, uye zviri nani, zvine musoro uye zvakabatana kugadzirisa zvinodiwa nemutengi.
Chechipiri, kusarudzwa kwemavara: maitiro ekunyora ndeyekurongedza kwechigadzirwa, kunaka kwechigadzirwa kune hukama zvakananga nekutaridzika uye kushambadzira kwechigadzirwa, iyo label ine yakanyanya kurongeka, kudhinda mhedzisiro yakanaka, iyo label. inotsvedzerera uye haina kuunyana, uye hapana blistering chiratidzo chechigadzirwa.Ichada kuderedza chigadzirwa giredhi.
Tichifunga nezvekugadzikana kwemuchina wekunyora: muchina wakanaka wekunyora unogona kungoita shuwa kushanda kwemuchina uri pasi pemutoro wakakura kwenguva yakareba chete kana chimiro chemuchina chakagadzirwa zvine mutsindo, kurongeka kwakasiyana kwedunhu kunogara, chimiro chezvikamu chiri. yakagadzikana, uye mhando yacho yakakwirira.
Iko kushanda kwenguva refu kwakagadzikana kweS-CONNING rekunyorera muchina unogona kuderedza mutengo wekugadzirisa wemushandisi, kusangana nezvinodiwa zvekugadzira zvemushandisi, uye kuunza vimbiso yemhando uye kusvetuka kwekugadzira kune mutengi.
Sticker Labeling Machine Manufacture, Commercial Bottle Labeling Machine, Plastiki Chisimbiso Machine, Printer For Cosmetics Jars Bottles, Label Applicator Machine Yemabhokisi, Syringe Assembly uye Labeling System,